Dugsiyada sare oo tartan adag ugu jira kala hanashada ardeyda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dugsiyada sare oo tartan adag ugu jira kala hanashada ardeyda
La daabacay tisdag 25 november 2014 kl 14.00
Tartan aad u ba'an ayaa ka jira.
Ikväll kan den som besöker Österlengymnasiet hjälpa till att slå in julklapparna. Foto: Mattias Lundvall/Sveriges radio
Bisha feeberaayo ee sannadka foodda innagu soo haya ayaa ku beegan xilligii ey dhallaanka ka baxaya fasallada sagaalaad ee dugsiyada Hoose/dhexe kala dooran jireen noocyada kala duwan ee dugsiyada sare. Iyadoona uu si dardar leh u biloowday tartankii ey dugsiyada sare ugu jireen hanashada dhallaanka, middaasina loo mareyo in dugsi walba uu albaabbada u furo in booqashooyi, isla-markaana ey ka qayb-qaataan carwooyinka lagu soo ban-dhigeyo dugsiyada sare.
Ardeyda dhigata fasallada sagaalaad ee dugsiga Hagsätra ee magaalada Stockholm ayaa ku sugan carwo kuwaa la mid ah. Daniella Torres, waa 15 jir. Gabadhaa ayaa qorsheeysaneeysa iney dhigato dugsi sare ee loogu diyaargaroobeyo tacliinta jaamicadaha:
- Waa meel aad u wayn, dad badan ayaa ku sugan. Waxaa jira waddooyin badan oo la raaci karo. Way adag tahay sidii lagu heli lahaa meelaha kala duwan.
- Waa la buuxaa. Dad badan ayaa ku sugan halka, sida uu sheegay Fernando Riofrio, oo ay Daniella Torres isku fasal dhigtaan.
Muddadii u dhexeeysay 2003 iyo 2013 ayey laba jibaar kor u kaceen dugsiyada sare ee dalka ka jira. Badankood dugsiyada sare ee cusub waa kuwo gaar loo leeyahay, waxeyna dhacaan magaalooyinka waaweyn.
Magaalooyinka waaweyn ayey dhallaanka dugsiyada sare dhigtaa barkood ey ka dhigtaan dugsiyo gaar loo leeyahey, halka tiradaasi gaarsiisan tahay tobankii ilmoodba mid dugsiyada sare ee ku yaala magaalooyinka yaryar.
Carwada xaafadda Älvsjö ayey sannadka ku hardameyaan sidii loo kala hanan lahaa dhallaanka 100-ka kun kor u dhaafaya ee kadhowaantan ka soo qalin-jebin doona fasallada sagaalaad ee dugsiyada hoose/dhexe. Fernando Riofrio wuxuu ku talo jiraa inuu galo dugsiga sare ee laanta korontada, wuxuuna hadal hayaa laba iskuul.
- Haddii aan dooran lahaa midkood waxaan dooran lahaa dugsiga St. Erik. Wuxuu u eg yahay mid ka wanaag-san. Suurtagallo badan ayaa jira. Way ka sahlan tahay in kombiyuutar lagu shaqeeyo, halkii buug iyo qoraallo lagu mashquul-sanaan lahaa, kolka koranto laga hadleyo.
Goobta waxaa taagan ardey wax ka dhigata iyo macallimiin ka howl-gasha dugsiyada sare sidii ey ugu war-gelin lahaayeen ardeyda u diyaargaroobeysa iney kala doortaan waxbarashada dugsiyada sare.
Enzo waa 17 jir dhigta dusgiga sare ee Jensen.
- Waxaan halka u joognaa sidii aan u meteli laheyn dugsiyada aannu dhigano. Waxaannu dooneynaa inaannu adkeeyno dhaqaalaha iyo jiritaanka iskuulka , iyada oo dhabbada loo mari karaa tahay in ardey ka badan loo helo.
- Guddiga ardeyda ee dugsiga sare Östra Reals ayaa sheegay iney leeyihiin hal-ku-dheg ah: Östra Real maahan iskuul ee waa hab-nololeed.
Östra Real waa iskuulka ay Daniella Torres jeclaan lahayd inay bdugsi sare ku dhigato. Ho ray ayay middaa u ogsoonayd. Hase yeeshee waxay bilowday inay sidoo kale ku fikirto iskuullo kale.
- Intii aanan carwadan iman waxaan un jeclaa hal iskuul, laakiin kolkii aan halka imid waxaan arkay suurtagallo ka duwan.
Kristoffer Jarefeldt wuxuu labaatankii sannadood ee ugu dambeeyey ku howl-galayay soo saarka dhabba-tuska dugsiyada sare - waa tusmeeye ama kataloog dugsiyada sare ee loo diro dhammaan ardeyda dhigata fasallada sagaalaad.
- Fikirka aan qabaa wuxuu yahay iney jiraan iskuullo badan oo la kala doorto. Waxaa iminka soo baxa war-bixinno lagu sheego caafimaad darro dhanka maskaxda iyo kadeedka oo kor u kacay. Waxaanan aamin-sanahay inay kala doorashada xad-dhaafka ah iyo war-bixinnada aan xadka lahayni ugu wacan tahay, sida uu sheegay Kristoffer Jarefeldt.
Cabbiraad xayeeysiin oo ay sameeysay shirkadda tira-koobka ee SIFO ayay ku caddaatay in dugsiyada sare ee dalku ey xayeeysiin ku maal-geliyeen sannadkii ina dhaafay 2013 miisaaniyad gaarsii-san 30 malyuun oo koronka iswiidhishka ah, oo aaney weliba ku jirin xayeeysiinta sida tooska ah loogu sameeyo shaashadda internet-ka iyo sidoo kale saacadaha lagu bixiyo carwooyinka iyo booqashooyinka iskuullada ee xilliyada ey albaabbadu u furan yihiin. Iyada oo xilliyada ey iskuulladu albaabbada u furan yihiin noqdeen kuwo muhiimad ballaaran ku fadhiya, sida uu sheegay Kristoffer Jarefeldt.
"ku hanashada", tusaale ahaan ballan-qaadyada kombiyuutarrada ee ardeyda cusub, ayey si ka ballaaran loo caadeeystey sanooyin aan badneyn hortood. Ardeyda ayaa falkaa maanta u fahanta sidii mid aan xiisa lahayn. Hase yeeshee aanu dhammaan falkaasi weli joog-san guud ahaan.
- Natiijada la dooneyo ayaa xaqiiqdii salka ku haysa sidii dusgiga loogu soo jiidi lahaa tiro ardey ee ka badan. Iyadoona uu tartanka furani aad kor ugu sii kacayo haddba siyaabo kala duwan loo isticmaalo in dhallaanka lagu soo jiito. Halkaa ayaa laga yaabaa mararka qaarkood in xadka laga baxo, sida uu sheegay Kristoffer Jarefeldt oo ka howl-gala soo ban-dhigga qoraalka hagaha ee dugsiyada sare.
Ma adag tahay kala doorashada dugsiyada sare?
Ima soo marin
tisdag 25 november 2014 kl 10.57